Su'aalaha La Weydiiyo - Warshadaha D&L Iyo Ganacsiga (Xuzhou) Co. Ltd.
Miyaan ku dhejin karaa astaanteyda muraayadaha indhaha?
Haa, astaan ​​caado ayaa la heli karaa.
Faylkee ayaan u baahan doonaa inaan kuu soo diro?
AI ama PDF
Qiimaha muunada la celinayo mise maya?
Haa, tirada ugu yar ee dalab ee keydku waa 2 · 10pcs.
Maxay yihiin faa'iidooyinka muraayadaha muraayadaha indhaha mir
Muraayadaha muraayadaha muraayadda ahi waxay leeyihiin daahan milicsiga ah oo yareynaya xaddiga iftiinka u gudbaya isha.
Waa maxay faa'iidooyinka muraayadaha indhaha?
Muraayadaha muraayadaha ee 'Gradient lenses' ayaa ka billowda midab madow illaa midab khafiif ah, taas oo u oggolaanaysa xiss isku xirnaanta meelo badan oo masaafo iyo nalalka ah.
Sideen u daryeelaa muraayadaha indhaha?
Nadaafadda muraayadaha indhaha oo nadiif ah iyaga oo ka caawinaya iyaga - oo adiguba - sifiican ayaad u muuqataa oo sifiican ayaad u soo bandhigtay. Si kastaba ha noqotee, muraayadaha indhaha iyo gaar ahaan muraayadaha indhaha waxay u baahan yihiin daaweyn taxaddar leh. Daryeelka aan habboonayn wuxuu dhaawici karaa muraayadaha indhaha, taasoo keenta xoqid ama caajis, taas oo iyaduna sababi karta indho-fiiqista.
Marka, habka ugu wanaagsan ee lagu nadiifiyo muraayadaha indhaha ayaa ah adigoo si tartiib ah ugu xoqaaya maro nadiifinta muraayadaha indhaha iyo nadiifiye dareere ah oo si gaar ah loogu talagalay muraayadaha indhaha, ama tuwaal hore oo qoyan.
Si looga fogaado waxyeello, waligaa ha ku nadiifinin muraayadaha indhahaaga tuwaal waraaqo ama dhar ah, oo u rogi kara siigada iyo fiilooyinka muraayadaha indhaha isla markaana ka tagi kara xagashada. Sidoo kale iska ilaali inaad isticmaashid saabuunta guriga lagu dhaqo ama saabuunta. In kasta oo dhowr saabuun oo khafiif ahi ayan waxyeello u geysanaynin lens-ka, saabuunaha maanta ee xoogga dheeraadka ahi ay yihiin kuwo awood ku filan oo tartiib tartiib ah u kala daadanaya dahaadhka muraayadaha. Nadiifiyeyaasha muraayadaha gaar ahaan waa kuwo si aad ah wax u fala isla markaana dhaawici kara muraayadaha indhaha. Looma qorsheynin in loogu isticmaalo qalabka muraayadaha aan muraayadaha ahayn ee loo isticmaalo muraayadaha indhaha.
In kasta oo alaabooyinkaas midkoodna uusan waxyeello muuqda oo degdeg ah u geysan doonin dareenkaaga, waqti ka dib iyo dib u soo noqnoqoshada, dhaawaca ayaa muuqda.